Carolina Crescentini | October 2021
Carolina Crescentini Nude Scene oo ka socota 'Kala hadal jacaylka'
Ka fiiri muuqaal cusub qaawan Carolina Crescentini oo ka socota 'Parlami d'amore', halkaas oo aan ka arki karno haweeneydan quruxda badan oo shaati cad leh, oo la hadlaysa med. Markaasay xoogaa ka qaadaysaa oo ay hoos ugu jiidanaysaa si ay u muujiso timaheeda cabiran iyo kuwa dabiiciga ah. Waxaan jeclahay atariishadan, dhaqdhaqaaqeeda iyo muuqaalkeeduba waa sidaas ...
Carolina Crescentini Muuqaalka Galmada ee 'Wax iiga sheeg jacaylka'
Waxaa jira hal mar oo dheeri ah Carolina Crescentini oo galmo ka socota 'Parlami d'amore', halkaas oo haweeneydan quruxda badan ee quruxda badan lagu nacsiinayo dhowr meelood! Gabi ahaanba way qaawan tahay, oo muujineysa burooyinkeeda iyo ibta adag, ka dib waxaan arki karnaa iyada oo dhunkanaya oo taahaysa, oo qaadanaysa digaagdeeda ninkeeda oo ay jeceshahay! Ku raaxayso oo booqo qaawanaantayada kale ee caanka ah ...
Carolina Crescentini Muuqaalka Jinsiga ee 'Tilmaanta jacaylka'
Mid kale oo ka mid ah Carolina Crescentini oo ah goob galmo aan dhammeystirneyn oo ka timid 'Parlami d'amore' ayaa halkan taal, haddaba u dhaqso si aad u aragto naasahaas quruxda badan iyo boogaha midba mar! Waxaa jira Carolina oo qaawan markii ugu horreysay sariirta ninkeeda, way dhunkanayaan oo ay salaaxayaan. Markaasuu iyada u maydhayaa, waxay umuuqataa inay ooyneyso ama ay leedahay nooc ka mid ah weerarka argagaxa! ...
ayaa Emma Roberts ahayd qaawan
debby Ryan xaday qaawan
kate upton ayaa xaday cajalad galmo
sawiro qaawan oo rhonda rousey ah